Faah faahin:- Afgembiga Jig Jiga Ka Socda – Gorfeeyaha Wararka Goor Walbo iyo Goob Kasto
Xaaladda magaalada jigjiga oo aad u kacsan iyo ciidama liyuuga iyo kuwa dowladda dhexe oo is horfadhiya, mid walbaana dhankiisa heegan kaga jiro.
Saaka waa barigii hore ayaa lagu arkay ciidamadda itoobiyaan ah oo ku sugan dhawr meelood oo magaalada ah; Sida isgoyska sayidka iyo qaryan-dhoodaan. Waa laba isgosy oo isu muuqda. Ciidanka gaar ah ee deegaanka ayaa isna heegan ku jira. Any minute ayuu xaalku isbaddali karaa. Qaar ka mid ah, maamulka cabdi-ilay ayaa ii sheegay; in gooni istaag laga cabdsi-qabo in maamulku ku dhawaaqo. Ka dib markii shir degdeg ah loogu yeedhay baarlamaanka deegaanka oo ah kuwo; cabdi-ilay gacanta ugu jira.
Shacabka magaalada ayaa aad uga cadhaysan ciidamada itoobiya oo haray loogu yiqiinnay arxan-darri iyo xasuuq bahalnimo ah oo ay kula kici jireen shacabka.Dad shacab ahoo aan khadka taleefanka kula hadlay ayaa ii sheegay in ay sugayaan inta xabaddu ka bilaabanayso.
Waxaan u soo jeedinayaa shacabka soomaali-galbeed inay dhagaxa kula dagaallamaan ciidanka itoobiya oo aan fursad la siin, marnaba. Dad in la addoonsado loo abuuray ma nihin ee ha lays difaaco. Ciidanka liyuuga waxaan u sheegayaa haddii aad dadkiinna layn jirteen, oo la idinku shaqaystay danta itoobiyana ka shaqaynayseen, maanta ayaa la idiinka baahan yahay inaad difaacdaan dhulkiinna.